LibreOffice इम्प्रेस स्वतसजावटहरू स्लाईड शीर्षकहरू, पाठ, र वस्तुहरूका लागि placeholders प्रयोग गर्नुहोस्. placeholder चयन गर्नका लागि, थिच्नुहोस् Ctrl+प्रविष्ट. अर्को placeholder मा लैजानका लागि, थिच्नुहोस् Ctrl+प्रविष्ट फेरि
यदि तपाईँले प्रेस गर्नुभयो भने Ctrl+प्रविष्ट स्लाईडमा तपाईँ अन्तिम placeholder पछि पुग्नु भयो भने, नयाँ स्लाईड हालको स्लाईड पछि घुसाइन्छ, नयाँ स्लाईडले हालको स्लाईड जस्तै उस्तै सजावट प्रयोग गर्दछ ।
स्लाइमा नेभिगेट गर्नका लागि बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईँ प्रतिलिपि गर्न चाहनुहुन्छ, र थिच्नुहोस् Ctrl+C.
स्लाइमा लैजानुहोस् जहाँ तपाईँ प्रतिलिपि गरिएको स्लाईड टाँस्न चाहनुहुन्छ, र थिच्नुहोस् Ctrl+V.
स्लाईड नेभिगेट गर्नका लागि बाँण कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईँ लैजान चाहनुहुन्थ्यो, र थिच्नुहोस् Ctrl+X.
स्लाईड नेभिगेट गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ स्लाईड लैजान चाहनुहुन्थ्यो, र थिच्नुहोस् Ctrl+V.